Tag: Muuqaalka Xogta | Martech Zone
Tag: Muuqaalka Xogta
Marka aan la shaqeyno xogta iyo xog uruurinta waaweyn iyo macaamiisha, waxaan ogaanay in xogta ay aad u khatar badan tahay markii si khaldan loo tarjumay ama loo turjumay. Suuqleyda ayaa mararka qaar ka faa'iideysta tan si ay ugu rogaan tarjumaadda macaashka macaamilka. Tani waa nasiib darro maadaama ay u horseedi karto rajooyin la seegay. Xogta oo la fiiriyaa waxay noqon kartaa khiyaano, laakiin xogta muuqaalka ayaa noqon karta mid wax sheegta. Markaan ku shaqeyneyno sawir-qaadis, amarka muuqaalku wuxuu u baahan yahay inuu ahaado
Waxaan wax ka qornay isbeddelada cajiibka ah ee muuqaalka muuqaalka ah ee lagu soo maray goobaha isboortiga ee leh Postano (oo dhistay codsigeenna moobiilka). Tani waa qayb sii kordheysa ee tikniyoolajiyadda. Fikradayda, waxaan aaminsanahay in shirkadaha badankood ay yeelan doonaan guddiyo indha indheyn iyo xarumo amar ah, in kasta oo laga yaabo inaysan u noqon doonin kuwa la yaab leh sida Buzz Radar ee loogu talagalay Bandhigga Macaamiisha Elektaroniga ee 2014 ee Caalamiga ah: Waqtigan xaadirka ah ee Beta, Buzz Radar wuxuu ku yaal London wuxuuna bixiyaa